Thwebula PunkBuster 3.8 – Vessoft
PunkBuster – a software ukubona amakhodi cheaters software asetshenziswa abadlali kule imidlalo online ukuthi. PunkBuster usinikeza isivikelo umsebenzisi ngokumelene cheaters kanye namasu yabo yokungathembeki enjalo imidlalo ethandwa njengoba Battlefield, Far Cry, Medal of Honor, Quake njll software isebenzisa module ekhethekile ukubona cheaters futhi ngokuzenzakalelayo ususa nabo game bese izindawo the lwabashokobezi. PunkBuster futhi kwenza ukuvikela umsebenzisi kusukela abadlali ukuthi ukusebenzisa inhlamba noma sixhaphaze abanye abadlali ngesikhathi Gameplay. PunkBuster iqukethe umsebenzi ukuvuselela zonke izingxenye uhlelo ngokuzenzakalelayo.
Ukuvikelwa ngokumelene software cheaters
Ukuthola cheaters in the game
Ukuvikelwa ngokumelene lengcolile
Buyekeza Automatic of the system
Amazwana on PunkBuster:
PunkBuster Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Easeus Partition Master 11.9 Professional futhi Free